ဘာသာရေး, Esoteric | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ဘာသာရေး, Esoteric
ဟာအာရီလူမျိုးများကဘယ်သူတွေလဲ။ ? ငါ့မှာအစိမ်းရောင်မျက်လုံးများရှိပါတယ်။
ဟာအာရီလူမျိုးများကဘယ်သူတွေလဲ။ ? ငါ့မှာအစိမ်းရောင်မျက်လုံးများရှိပါတယ်။ တဖန်သင်တို့သွေးအုပ်စုကိုရှာဖွေနေဆဲ, များစွာသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာတို့ကိုလည်းရှိပါတယ်။ Slavs-Aryans (RASA) တွင်လူမျိုး ၄ မျိုးပါဝင်ပြီးကွဲပြားခြားနားမှုများအပါအဝင် ...
ခေါင်းပေါ်မှာထိပ်သုံးခုကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ဘယ်နှစ်ယောက်ထိပ်ဆုံး - ဤမျှလောက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား))) ။ သို့သော်နေရာတိုင်း၌ဤနိမိတ်လက္ခဏာကို))) ချိုးဖောက်နေသည်။ ချာနိုဘိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ဦး ခေါင်းခွံပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးအချို့ကိုပြသသည်။
အဘယ်အရာကိုနှစျတှငျရာစု 22 ကြမည်နည်း
၂၂ ရာစုမည်သည့်နှစ်ဖြစ်မည်နည်း။ 22 ၌တည်၏။ ၁၉၉၀ တွင် ၂၀ ရာစုနှစ် ၂၀၂၀ တွင် ၂၁၁၁ ခုနှစ်တွင် ၂၁၀၀၊ ၂၁၀၁ ခုနှစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
သငျသညျငရဲ၏7စက်ဝိုင်းအကြောင်းကိုဘာသိရသလဲ
ငရဲ ၇ လုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာသိသနည်း။ nuuuu ... ဒါသည် Dante ၏ "ဘုရားသခင့်ဟာသ" မှကြည့်သည်။ Garuda Purana တွင်ကြည့်သည်။ ဝေဒ၏သေခြင်းစာအုပ်ဟုလည်းခေါ်သည်။
ထွန်စက်ကဘယ်သူလဲ "စီးတီး" တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ (၂၀၁၄) "ရိတ်ခ်သည်ငယ်ရွယ်သောရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်အမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့ပြီးသူ၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်အလွန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးနောက်မှာသူလိုချင်တာကိုရခဲ့တယ်။
အဘယ်သူသည်အကြားအမြင် astro7 ခေါ်? သင့်ရဲ့အမြင်ကဘာလဲ?
စိတ်ပညာကို astro7 တွင်မည်သူခေါ်သနည်း။ မင်းထင်မြင်ချက်ကဘာလဲ အရမ်းဆိုး! ဒင်္ဂါးသည်မီးခိုးရောင်မောက်စ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူနှင့်တွဲဖက်သူကိုအံ့အားသင့်စေ။ မွေ့လျော်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အဘယ်သို့ငါ Qi စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲရန်သင်ယူကြပါ ??? chi များ၏စွမ်းအင်တခြားကဘာလဲ ??? အဘယ်သူသည်လုပ်နိုင် ??? သှနျသငျ !!! Pliiz !!!
Qi စွမ်းအင်ကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်နိုင်မည်နည်း။ chi စွမ်းအင်ကဘာလဲ ??? ဘယ်သူလုပ်နိုင်မှာလဲ ??? လေ့လာပါ။ PLIIZ !!! လူတစ် ဦး သည်မိခင်ထံမှမွေးဖွားချိန်တွင် Chi စွမ်းအင်၏ဝေစုကိုရရှိသည်။ စဉ်အတွင်း…
ဝိညာဉ်ရေးရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာဘာလဲ။ လူတစ် ဦး သည်ဝိညာဉ်ရေးတွင်မည်သို့တိုးတက်သင့်သနည်း။ ဆုတောင်းခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ ကောင်းသောအကျင့်များကိုပြုလုပ်ပါ။ ငွေရတတ်လျှင်သင်တို့ဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်း၊
ဘယ်လောက်ပဲဒဏ်ဍာရီရေး, နှင့်အမှု၌ကြဘူး .. မာရ်နတ်နှင့်သဘောတူညီချက်စေရန် !!!
မာရ်နတ်နှင့်မည်သို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်နည်း .. အနတ္တကိုသာရေးသည်မဟုတ်ဘဲစီးပွားရေးကိစ္စဖြစ်သည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာထမထနဲ့။ ထို့နောက်သင်ကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကိုင်မည်၊ မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်၊ သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်မသိပါ။
ဘာကြောင့်သုညကိုသုညနဲ့မြှောက်သလဲ?!?! ကျွန်ုပ်တို့သည်သုညကိုကိန်းဂဏန်းများ၏ခြားနားချက်အနေဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်၊ ဥပမာ ၃ - ၃ = 3၊ ဥပမာ၊ -3 ကိုသုညဖြင့်မြှောက်လျှင် ၄ * ရရှိသည်။
ငါဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲညသန်းခေါင်မှာနိုးထလာတာလဲ။ ဆီးအိမ်မှာတော့နိုးလာတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်နိုးနေစဉ် ... အခြားလောကကမ္ဘာ ... များသောအားဖြင့်အိပ်မက်ထဲတွင်တားမြစ်ထားသောဇုန်ထဲသို့ဝင်ရန်မသင့်ပါ။
သောအရေအတွက်ကို 15 ဆိုလိုတယ်?
နံပါတ် ၁၅ ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ဒီကိန်းဂဏန်းဟာအိပ်စက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မသိသောအရာက၎င်းသည်အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ နံပါတ် ၁၅ ကိုစာရေးသူများစွာကစဉ်းစားခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့ကိုခွဲခြားသိမြင်စေခဲ့သည် ...
ဘာသာရေးကဘာလဲ? ဘာသာရေးကဘာလဲ? Transcendentalism (mysticism) သည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအမြင် (၃) ၏အဓိကအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်း၏ပထမအမျိုးအစား - ရုပ်ဝါဒ။ အရာကိစ္စအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒုတိယ ...
ငါတကယ်ချမ်းသာလာပြီ၊ အောင်မြင်မှုကိုငါဆွဲဆောင်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ၊ ရလဒ်ကဘာလဲ။
ငါတကယ်ချမ်းသာလာပြီ၊ အောင်မြင်မှုကိုငါဆွဲဆောင်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ၊ ရလဒ်ကဘာလဲ။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုတစ်စုလုံးဂါထာများကိုရွတ်ဆိုပါက (ဤသို့ပြုခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ )
ကောင်းကင်တမန်ကားအဘယ်သူနည်း။ အာဗြဟံ၏ဘာသာတရားများတွင် (ရှေးဂရိ၊ အိန်ဂျယ်မက်စ်မက်စ်မက်စ်၊ သတင်းပို့သူ) သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာ၊ မယိုယွင်းနေသောဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့်သဘာဝလွန်စွမ်းအားများပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ယေဟောဝါ၏ကောင်းကင်တမန်များသည်အဖြစ်အပျက်များကိုညွှန်ကြားနိုင်သည် ...
နတ်သမီး Artemis ကဘာလဲ? Apollo Artemis (A rtemiz) အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ၏အမြွှာညီမသည်မသိနိုင်ပါ၊ မူကွဲများဖြစ်နိုင်သည်။
Teleport ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ။ ထိပ်မှလုယူ ... ။ သငျသညျရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားအားဖြင့်သာ teleported လိမ့်မည် ... သေချာပေါက်ဆေးပြားရှိပါတယ်!))) ဒီအားလုံးအလုပ်, ငါ့မိတ်ဆွေ, ရှည်လျားဇွဲရှိရှိ, နှစ်ပေါင်းများစွာ ... ဖြောင့်တဲ့ပုခက်ထဲက)) အိပ်ရာဝင်ပါ ...
အဘယ်အရာကိုက astral လေယာဉ်ကိုသှားဖို့ကိုဆိုလိုသလဲ အတွေ့အကြုံများနှင့်ခံစားချက်များကိုအမျိုးအစားကဘာလဲ? အဘယ်နည်း
နက္ခတ်တာရာသို့ထွက်ခြင်းဟူသည်အဘယ်နည်း။ ဒီအတွေ့အကြုံများနှင့်အာရုံဘာတွေလဲ? ဘာအတွက်လဲ အဲဒီမှာအမှားမရှိပါဘူး ငါတို့သိတယ်ထွက်သွား မင်းအသံမပါဘဲဗလာအခန်းထဲမှာထိုင်လျက်တံခါးကိုစိတ်ကူးနေသည်။
နဂါးကားမည်သူနည်းနေသည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥရောပမှာတော့သူဟာဆိုးဝါးတဲ့နဂါးတစ်ကောင်ပါ။ ပြီးတော့အရှေ့ဖျားမှာ (ဂျပန်၊ တရုတ်) က ၀ ိညာဉ်ပဲ။ နှင့်မည်သည့်ဝိညာဉျသကဲ့သို့ပင်သူသည်ဂိုးသမားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမင်းပဲ…
ငါ Tulp ဖန်တီးချင်ကူညီပါ!
ငါ Tulpa, HELP ဖန်တီးချင်! သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများသည်ကြင်နာမှု၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဲ့သို့သောပုံမှန်စရိုက်များကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။ မမြင်လိုပါ။ သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းဝက်သည်ဖုန်ဖြစ်သည်။
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,115 စက္ကန့်ကျော် Generate ။